XIKOO Mbiri - GUANGZHOU XIKOO INDUSTRY CO., LTD
Kupfuura zvinopfuura gumi neshanu zvigadzirwa zvitsva zvinokudziridza uye zvekare mamodheru kukwidziridzwa, kune anopfuura makumi maviri marudzi emamodeli eakasiyana application. XIKOO main zvigadzirwa zvinosanganisira inotakurika mweya inotonhorera, maindasitiri emhepo anotonhorera, hwindo mhepo inotonhorera, centrifugal mweya inotonhorera, rezuva DC mhepo inotonhorera uye mhepo inotonhorera zvikamu. inoshandiswa zvakanyanya kumba, hofisi, zvitoro, chipatara, zviteshi, tende, greenhouse, restaurant, workshop, imba yekuchengetera nedzimwe nzvimbo.
XIKOO yepamusha yekutengesa network inovhara mapurovhinzi makumi maviri neshanu uye makumi matanhatu neshanu ematunhu akasimukira, vanopfuura 112 vaparadzi munyika yese. Uye zvigadzirwa zvinotengeswa kune makumi matatu nematatu nyika dzekunze uye matunhu. Kunyanya kukudziridza kwenguva refu kubatana vatengi muSaudi Arabhu, Kuwait, Mali, Moroko, Sudan, Vietnam, Malaysia, Thailand, USA, Brazil, Germany, Australia nedzimwe nyika.
XIKOO Ramba uchitsvaga uye hunyanzvi, yakahwina yepamusoro tech bhizinesi, yepamusoro tech chigadzirwa uye kumwe kukudzwa. Yakawana akawanda dhizaini patent, yekugadzira patent uye inoshanda patent. Mhepo inotonhorera feni yakaderera kudyiwa uye nharaunda zvine hushamwari chigadzirwa, XIKOO yakagadzirawo nyowani sosi sosi rezuva DC evaporative mweya inotonhorera. isu tinoshuvira kupa kune yedu yepasi simba rekuchengetedza uye hushamwari kuvaka kwezvakatipoteredza kuburikidza neXIKOO mhepo inotonhorera kusimudzira uye kushanda.
XKIOO yakaisa mari yakawanda uye inoshanda muzvigadzirwa zvitsva zvigadzirwa makore apfuura. Mune ramangwana, isu tichaunza zvimwe zvigadzirwa zvitsva zvevatengi vedu, Gamuchirai kubatana pamwe neXIKOO, Gamuchirai yako pfungwa yakanaka uye gadzira zvigadzirwa zvitsva neXIKOO.